High Point (Afaan Oromoo)
Baga gara High Point
Orchard nagaan dhuftan
High Point Orchard guddina Seattle ni kabaja akkasumas hariiroo lafa,
nyaataa fi hawaasaa wajjiin qabnu nu yaadachiisa Mukkeen kunneen
mukkeen fuduraa 500 ol kan magaalaa keessatti ummataaf yaadamanitti
ni makamu fayyadamuu, eegumsaa fi gammachuu Mukkeen jalqabaa oyiruu fuduraa kanaa kiwi, balasii, poomii, cherry, persimmon, and pear of
keessatti hammata. Mukkeen Swansons Nursery, West Seattle Nursery
(Iddoo Kunuunsa Seatle Dhiyaa) fi the Friends of Piper’s Orchard (Hiriyoota Ooyiruu fuduraa Piper) irraa kan kennameedha.
Biqiltoonni guutuu ta’an hundeewwan muka fuduraa cinaa jiran adeemsa biqiltuu
dhaabuu biyya keessaa kan seenaa lafa kanaatif kabaja kennuu fifayyaa mukaa waligalaa fi firii buusuu kan beeksisuudha. Shaakalliin kuni yeroo baay’ee permaculture jedhama akkasumas ilbisoota ooyiruuwwan fuduraa durii irratti dhiibbaa fidan hir’isuuf gargaaruu mala.
Haala ilaalcha ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa Seattle fuduraawwan mukkeen kana irraa argaman daawwattoota hundaaf banaa fi jiraattoota kan fakkaataniidha. Maaloo wanta bilchaata argittan kamiyyuu filadhaa akkasumas mukkeen fuduraa akka guddatanii fi dararan gargaaruf nutti makamaa.
“Lafti kan namaatii miti, namaatu kan lafaati. Kan nuti beeknu, wantoonni hunduu akka dhiiga maatii tokko godhuu wal qabataniiru. Wantoonni hundi wal qabatu.”
– Dursaa Si’ahl, Namesake magaalaa Seatle.
Guyyaa Lafaa 2021 tif, City Fruit, Seattle Housing Authority, Neighborhood House, fi Open Space Association of High Point gammachuu hawaasatiif ooyiruu fuduraa hawaasaa haaraa kana ijaaruf gamtaa’aniiru.
Ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa Seattle keessatti seenaa dheeraa qabu. 1890 keessatti mana daabboo tolchu maatii isaa gargaaruf, mukkeen A.W. Piper mukkeen poomii, cherry fi pear ollaa guyyaa ammaa kan Broadview keessatti dhaabera. Mukkeen kunnen booda akka Piper Orchard Carkeek Park beekamu. Ooyiruuwwan fuduraa biroo kan akka Amy Yee Mount Baker keessa jiru akka mukkeen kophaatti guddatanii fi gamtaadhan akka ooyiruu hawaasatti beekamuun dura kan eegaman 1940 hundeeffaman.
Ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa yeroo dhiyoo kan akka Picardo Ravenna keessa jiru 1973 booda P-Patch public gardens and orchards (manduubeewwanii fi ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa P-Patch) boca qabachuu ega eegaleen booda eegalan. Yeroo san irraa eegalee, ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa biroo itti yaadamanii hojjetamaniidha, Linden Park Orchard Phinney Ridge keessa jiruu fi Angel Morgan Brighton keessa jiru dabalatee.
High Point Orchard guddina Seattle ni kabaja akkasumas hariiroo lafa, nyaataa fi hawaasaa wajjiin qabnu nu yaadachiisa Ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa keenya irratti dabaluun kana dhaabuudhan, keessumattuu jiraattoota baay’ee mana ollaa kanaaf bilbilaan tajaajiluun hawaasaa keenya keessatti mukkeen dabalataa baay’inaan dabaluuf yaadnerra.
Mukkeen fuduraa baay’een including kiwi, fig, poomii, cherry, persimmon, fi pear dabalatee, Swansons Nursery fi West Seattle Nursery irraa kan kennamanii fi paarkii keessatti argamuu danda’uu. Iddoo kana iddoo sirriitti faayidaa irra oolu ta’uu isaa fi manduubee P-Patch fi bakka kannisa itti horsisan duursanii hundeeffamanitti dhiyoo waan ta’eef wiirtuu ooyiruu fuduraa akka ta’u filatamee ture. City Fruit shaakallii biyya keessaa biqiltoota guutuu ta’an hundeewwan muka fuduraa tokkoon tokkoon cinaa jiran seenaa lafa kanaatif kabaja kennuu fi fayyaa mukaa waligalaa fi firii buusuu kan beeksisuudhaf eegaleera. Shaakkalliin kuni, yeroo baay’ee permaculture kan jedhamu, ooyiruu fuduraa fi manduubee hawaasaa, Beacon Food Forest biraa irratti haala milkaa’ina qabuun hojiirra oolera, akkasumas ilbiisota ooyiruuwwan fuduraa durii irratti dhiibbaa fidan hir’isuufis ni gargaaruu jennee amanna.
Mukkeen poomii Belmont afran as jiran kan hundee wajjiin walitti qabamanii akka guddatan taasifaman kan Friends of Piper’s Orchard(hiriyoota Ooyiruu Fuduraa Piper) tin umurii waggoota 130+ ta’uu danda’an–dhaabbattoota afran pirojektii kanaaf walitti dhufanii fi waggoota dhufan keessatti ooyiruu fuduraa kana eeguu gargaaruf kutannoo qabaniidha. Mukkeen kanneenii fi miiltummaa keenyan, seenaa ooyiruuwwan fuduraa hawaasaa kan akka lafaa, hawaasaa kabajuu fi abdii mukkeen kunneen waggoota dhibban miseensota hawaasaa fi jiraattoota keessaati akka itti gammadaniif firii ni buusaa kan jedhu itti fufnee jirra.